DET AMANDLA TECHNOLOGY CO., LTD
Gxininisa kumandla aluhlaza, Ngena nzulu kwishishini kwaye usebenzise itekhnoloji yebhetri ukubonelela ngezisombululo zamandla aluhlaza
Amandla e-DET-igama elidumileyo kwihlabathi lokwenziwa kwezixhobo zebhetri
Ubume obuphucukileyo bokwenza ngokwezifiso kwishishini lakho lesicelo esithile.
Iminyaka eyi-12 iqhubeka nokuphuhlisa amava kushishino lweebhetri.
DET AMANDLA TECHNOLOGY CO., LTD, "ugcino lwamandla ohlaza oluhlanganisiweyo umboneleli wenkonzo ngexesha ledatha enkulu", wabelana nomhlaba oluhlaza kunye nabathengi behlabathi kunye nobuchwepheshe bamandla obukhangele phambili.
Siphonononga ngenkuthalo kwaye sifumanisa ihlabathi elitsha elikhulayo lamandla-kugcino lwamandla,DET AMANDLAinoluhlu olupheleleyo lwezisombululo zokugcina amandla ukubonelela ngesiqinisekiso samandla aluhlaza;Vumela amandla ukuba aphinde asetyenziswe kwaye ahlaziywe, ukunciphisa ilahleko yemithombo kunye nokubuyisela umhlaba onempilo.
DET AMANDLA"ishishini lesizwe elinobuhlobo kokusingqongileyo" kushishino, kunye nokuphumelela ngokuhloniphekileyo "iqela lesizwe eliphambili lobugcisa obuphezulu", "i-China ephezulu ye-100 yamashishini olwazi lwe-elektroniki" kunye "nehlabathi eliphezulu lamashishini angama-500 amatsha amandla".
Ibhetri yogcino lwamandla olunzulu kunye namandla
"Ukuhlala ufunxa iikhonsepthi eziphambili zehlabathi kunye netekhnoloji kunye nokuphucula amandla okuqamba okuzimeleyo kumandla okuqhuba kunye nesizathu esingqongqo sangaphakathi sophuhliso lwe-detai."
Iqhinga le-DET lizinze e-Dongguan kwaye lineziseko zokuvelisa ibhetri: isiseko seshishini saseShaoguan Renhua kunye ne-Dongguan.Iziseko zayo ze-R & D ziseDongguan, eShenzhen naseNetherlands
Os imoles pendebat.Sidera fuerat.Ulla solum homo dei.Phoebe nec temperiem gravitate diffundi unus perpetuum media.
Sithatha indlela esezantsi kwiprojekthi nganye.Abathengi bethu bahlala bebona ukwanda kwetrafikhi, ukunyaniseka kwegama eliphuculweyo kunye neenkokeli ezintsha enkosi kumsebenzi wethu.
- - DET AMANDLA.CEO.UMnu. LI
UKUSUSELA KUNYAKA KA-2008
AMANDLA WEMVELISO WH
IBHETRI Umthamo wemveliso